9-Me-BC Chiitiko: 7 Chokwadi Nezve Iwe Unofanira Kuziva
9-Me-BC chiitiko: 7 chokwadi nezve 9-Me-BC iwe unofanirwa kuziva
Chii chinonzi 9-ME-BC?
9-Me-BC (9-Methyl-β-carboline) inozivikanwawo se9-MBC inoverengeka nootropic komputa kubva kune β-carboline boka. Iyo β-Carbolines inobva kumhuri yakasarudzika carboline. Izvi zvinoreva kuti zvinogadzirwa zvese zvisingagumi mumuviri wemunhu uye zvekare mune mimwe michero, nyama yakabikwa, utsi hwefodya nekofi.
Iyo β-Carbolines (BCs) inozivikanwa seanurotoxic, zvisinei, zvakawanikwa munguva pfupi yapfuura kuti 9-Me-Bc inobatsira. 9-Me-BC iyo dopaminergic neuroprotector iyo zvakare inowedzera kugona kwekuziva.
9-Me-BC poda pamwe ne9-Me-BC capsule kuwedzera fomu yakanakisa nootropic. Sezvo kusiyana nemamwe nootropics ayo mabhenefiti anopera mushure memaawa mashoma, 9-Me-BC inopa zvinogara kwenguva refu uye zvakareba mhedzisiro.
Phcoker inyanzvi yekugadzira kugadzira 9-me-bc poda
9-ME-BC poda- Inoshanda sei?
9-Me-BC yakanyatso kutenderera nootropic iyo inoratidza akati wandei maitiro ekuita. Iyo yakati wandei 9-Me-BC nzira dzekuita dzinoigonesa kuti ibudirire kwazvo munzira yayo yekuita.
Pazasi pane 9-Me-BC nzira dzekuita;
Inosimudza nhanho yedopamine muuropi nekudzivirira kuparara kwedopamine, kusiyana nezvimwe zvinokurudzira zvakaita caffeine iyo inoderedza dopamine nekuda kwekuburitswa zvakanyanya uye kushandiswa.
9-Me-BC inomutsa dopamine chiitiko, inosiyanisa pamwe nekudzivirira mauroni, dendrites uye synapses muuropi. Ichi ndicho chikonzero chiri kukwanisa kuwedzera kudzidza, ndangariro uye kugadzirisa basa
Iyo inokonzeresa iyo tyrosine hydroxylase (TH) uye yayo zvinyorwa zvinyorwa ichipindirana neiyo tyrosine kinases. Iyo tyrosine kinases inoita basa mukushandura L-tyrosine kuenda kuL-Dopa inoitisa iyo synthesis ye dopamine.
9-Me-BC inodzivirira monoamine oxidase A uye B (MAOA uye MAOB) nekudaro inodzivirira kugadzirwa kwemakemikari eurouroxic akadai seDOPAC kubva kune dopamine metabolism. Izvi zvinhu zvinokonzeresa kufa kwedopaminergic neurons.
9-Me-BC inowedzera mitochondrial nzira yekufema. Inoita izvi nekuwedzera kana kuchengetedza iyo NADH dehydrogenase, iyo inoshandiswa mukushambadzira kwema electron ekugadzira magetsi.
9-Me-BC inogona zvakare kuwedzera maurotrophic zvinhu zvakaita seNerve grow factor (NGF), SHH (Sonic Hedgehog Signaling Molecule), Brain-yakatorwa neurotrophic factor (BDNF) inosimudzira kugona kwekuziva, kutarisa pamwe nekukurudzira.
Iyo inomutsa chiitiko cheeuronal uku ichisimudzirawo kukura kwenyoni nyowani. Izvi zvinowedzera ndangariro uye kudzidza uye zvakajairika mashandiro ekuita.
Anti-kuzvimba zvivakwa. 9-me-BC inoitika kurwisa kuzvimba kusingaperi muuropi nekudzora kupisa cytokines, ayo anozivikanwa kukonzera microglial kuunganidza izvo zvinokanganisa kugona kwekuziva.
9-ME-BC inobatsira - Sei 9-ME-BC Powder (Nootropic) inogona kukubatsira?
9-Me-BC kuwedzera vane akasiyana siyana ehutano mabhenefiti. Iwo akasiyana 9-Me-BC mabhenefiti ari semhedzisiro yemaitiro akati wandei ezviito ayo yaanoratidza.
Pazasi pane 9-Me-BC mabhenefiti;
i. Unogona kuvandudza kudzidza, ndangariro uye kugona
9-Me-BC inosimudzira maNeuron chiitiko pamwe nekusimudzira kukura kwemaseru manyowani. Ichi chakakosha mukusimudzira kudzidza, ndangariro uye yakajairika yekuziva basa.
9-Me-BC zvakare wedzera ATP Kugadzirwa kwesimba nekusimudzira iyo mitochondrial yekufema cheni. Saka simba rakawedzera rinowedzera kukurudzira uye kusvinura.
Mune ongororo yemakonzo, 9-Me-BC yekuwedzera yakapihwa kwemazuva gumi yakawanikwa ichivandudza kudzidza. Chidzidzo ichi chakazivisa izvi zvaikonzerwa nekuwedzera dopamine mazinga pamwe nekusimudzira kukura kwesynapses uye dendrites.
ii. Inobatsira kurwisa kuzvimba
Kuzvimba inzira yechisimba iyo iyo muviri unorwa nehutachiona kana kukuvara. Zvisinei, kuzvimba kusingaperi kunogona kukuvadza muviri uye kwave kuchisanganiswa nezvirwere zvakawanda zvakaita seshuga nekenza.
Izvo zvinobva zvave kudikanwa kudzora uku kuzvimba kusati kwave kushatisa mumuviri wako. Neraki, 9-Me-BC poda inogona kubatsira kudzivirira kusingaperi kuzvimba. Iyo inorwisa kuzvimba nekudzikira kweanopisa cytokines.
III. Inogona kuwedzera libido
9-Me-BC nootropic komputa iri kwazvo dopaminergic. Dopaminergic makomputa anozivikanwa kuwedzera mazinga e dopamine muuropi. Izvi zvinowedzera basa re dopamine iro rakabatana zvakanyanya nekuwedzera libido.
Iv. Zvinogona kusimudzira mashandiro evatambi
Iko kugona kwe9-Me-BC kuwedzera kugadzirwa kwesimba uyezve manzwiro uye kurudziro zvinoita kuti ive inokwanisa kukwikwidza kubva mukuvandudza mashandiro evatambi.
9-Me-BC chiitiko: Mashandisiro ekushandisa 9-MBC?
Iyo yakakurudzirwa 9-Me-BC muyero uri kutora imwe 9-Me-BC kapisi zuva nezuva. Imwe 9-Me-BC kapisi yakaenzana ne15 mg yeiyo 9-Me-BC poda.
Zvinokurudzirwa kutora kapisi kapisi 9-Me-BC mangwanani sezvo zvichizivikanwa kuwedzera kuchenjerera, kushushikana, uye kurudziro, izvo zvauchazonyatsoda panguva yezuva rekuita.
Zvakachengeteka uye zviri pamutemo kushandisa 9-MBC? 9-me-bc njodzi?
9-MBC inoonekwa kazhinji yakachengeteka dietary supplement. Kubva pane chidzidzo chemhuka, 9-Me-BC nootropic inoitiswa kwemazuva gumi yakawanikwa ichinyatso chengeteka.
Nekudaro, hapana data rinowanikwa maererano nekushandiswa kwe9-Me-BC yekuwedzera kwenguva yakareba uye zvakare ishoma kwazvo kiriniki miedzo maererano neiyi 9-Me-BC nootropic.
Saka zvinokurudzirwa kutora hanya kana uchitora ino nootropic nekutora mabhureki pakati kudzivirira chero zvingangoitika 9-Me-BC njodzi dzinogona kumuka.
Iyo 9-Me-BC yekuwedzera iri pamutemo munyika dzese pasirese. Iyo yakarongedzwa uye inotengeswa seyakawedzera yekudya saka inotariswa nenzira imwecheteyo sekudya neKudya neDrug Administration.
Zviri pamutemo kuti chero munhu atenge uye ashandise 9-Me-BC yekuwedzera. Kunyangwe, 9-Me-BC ichionekwa seyakachengeteka zviri pamutemo, zvinokurudzirwa kuti mumwe abvunze chiremba wavo asati azvipira mazviri.
Kunyangwe 9-Me-BC yekuwedzera inowanzoonekwa seyakachengeteka, pane maviri makuru anogona kuitika 9-Me-Bc mhedzisiro iwe yaunogona kuona;
Photo-senitivity -kutarisana kwenguva refu nechiedza chezuva kunofanirwa kudzivirirwa kana uchishandisa 9-Me-BC kuwedzera sezvo izvi zvinogona kukonzeresa kukuvara kweDNA nekuda kweiyo UV mwaranzi kuratidzwa. Kana iwe uchifanira kunge uri pasi pechiedza chezuva chezuva chinenge chiri chakakodzera kudzivirira izvo zvataurwa 9-Me-BC mhedzisiro.
Dopamine neurotoxicity inogona zvakare kuitika; zvisinei, izvi zvinoitika kana iwe ukapfuudza iyo yakakurudzirwa 9-Me-BC muyero. Naizvozvo, inogona kudzivirirwa nekutora iyo yakakurudzirwa 9-Me-BC muyero.
Dzimwe 9-Me-BC mhedzisiro dzakataurwa kubva kune vashandisi vakagovana yavo 9-Me-BC chiitiko chinosanganisira kusvotwa uye kutemwa nemusoro. Nekudaro, izvi zvakashata mhedzisiro zvakanyanya kushomeka uye zvinongoitika kana munhu atora ovhadhozi ye9-Me-BC yekuwedzera.
Ndiani anogona kubatsirwa kubva ku9-me-bc (nootropic)?
Chaizvoizvo munhu wese anogona kukohwa mabhenefiti kubva ku9-Me-BC nootropic. Nekudaro, mamwe mapoka evanhu anogona kubatsirwa zvakanyanya kubva pa9-Me-BC kupfuura vamwe. Vashandi, vadzidzi uye vatambi vanogona kukohwa zvakawanda kubva 9-Me-BC inobatsira.
Sezvo, 9-Me-BC yakanyatsokwana uye yakanyanyisa dopaminergic, iri rakanakisa rekuwedzera kune vadzidzi vanoda kuwedzera kusvinura, kurudziro yekudzidza vachiri vachiri kugadzirisa kudzidza kwavo uye ndangariro yekurangarira zvimwe.
Kushanda kunogona kunetsa uye kuneta, asi nerombo rakanaka 9-Me-BC inopa kurudziro nesimba zvinowedzera kugona kwako pabasa. Iyo inokurudzira mauroni anokuchengetedza iwe kutarisisa munzira yese.
Vashandisi ve9-Me-BC wongororo vakanaka kwazvo vasina kana mashoma emigumisiro yakataurwa. Saka yakanaka kuwedzera kune ese.
9-ME-BC poda yekutengesa - Ndekupi kwekutenga 9-ME-BC?
9-Me-BC iri kutengeswa inowanikwa online. Nekudaro, yakakwira mwero yekuchena inofanirwa kuvimbiswa kuti iwe uwane izvo zvinotarisirwa mhedzisiro. Funga nezve 9-Me-BC ongororo kubva kune vashandisi kuti uwane ruzivo rweakanakisa 9-Me-BC kapsule kana upfu zvinowedzera.
Kungofanana nezvimwe zvekuwedzera, zvakanaka kufunga nezve njodzi dze9-Me-BC dzinogona kuitika uye kutora matanho anodiwa.
Vazhinji vashandisi ve9-Me-BC vanozvitenga kubva mukutenderwa nootropics vanotengesa uyo anopa 9-Me-BC iri kutengeswa pamhando yepamusoro kwazvo.
Paunofunga kushandisa 9-Me-BC tenga kubva kumakambani anopa 9-Me-BC kutengeswa muhuwandu hwakawanda kunakidzwa nemitengo yakadzikiswa.
Gille G., Gruss M., Schmitt A., Braun K., Enzensperger C., Fleck C. naAppenroth D. (2011) 9-Methyl-b-carboline inovandudza kudzidza nekurangarira mumakonzo. Neurodegen. Dis. 8, 195.
Gruss, M., Appenroth, D., Flubacher, A., Enzenperger, C., Bock, J., Fleck, C.,… Braun, K. (2012). 9-Methyl-β-carboline-inokonzeresa kukwidziridzwa inosanganisirwa neakakwira hippocampal dopamine mazinga uye dendritic uye synaptic kuwanda. Zvinyorwa zveNeurochemistry, 121 (6), 924-931.doi: 10.1111 / j.1471-4159.2012.07713. x.
Hamann, J., Wernicke, C., Lehmann, J., Reichmann, H., Rommelspacher, H., & Gille, G. (2008). 9-Methyl-β-carboline kumusoro-inogadzirisa kutaridzika kwekusiyaniswa kwedopaminergic neurones mune yekutanga mesencephalic tsika. Neurochemistry Nyika dzese, 52 (4-5), 688-700.doi: 10.1016 / j.neuint.2007.08.018.
Polanski W., Enzenperger C., Reichmann H. naGille G. (2010) Izvo zvakasarudzika zvivakwa zve9-methyl-beta-carboline: kukurudzira, kuchengetedza uye kumutsidzira kwe dopaminergic neurons pamwe neanopokana-nekukuvadza mhedzisiro. J. Neurochem. 113, 1659-1675.
Wernicke, C., Hellmann, J., Ziêba, B., Kuter, K., Ossowska, K., Frenzel, M.,… Rommelspacher, H. (2010). 9-Methyl-b-carboline ine yekudzoreredza mhedzisiro mumhando yemhuka yechirwere chaPasinson. Pharmacological Mishumo, 19.
RAW 9-METHYL-9H-BETA-CARBOLINE PODHA (2521-07-5)
1. Chii chinonzi 9-ME-BC?
2.9-ME-BC poda- Inoshanda sei?
3.9-ME-BC makomborero - 9-ME-BC Powder (Nootropic) ingakubatsira sei?
4. 9-Me-BC chiitiko: Mashandisiro ekushandisa 9-MBC?
5. Zvakachengeteka uye zviri pamutemo kushandisa 9-MBC? 9-me-bc njodzi?
6.Ndiani anogona kubatsirwa kubva ku9-me-bc (nootropic)?
7.9-ME-BC poda yekutengesa - Ndekupi kwekutenga 9-ME-BC?